september 2021 - NorSom News
Norsomnews - 30. september 2021
SV oo ka baxay wada-hadalkii xukuumad-dhiska sadexda xisbi.
Norsomnews - 29. september 2021
daawo: Dhakhtar Ayaan: Waxey dhahaan inaad Norwiiji noqoto, waxaa kaaga dhiman inaad xijaabka dhigto.
Norsomnews - 28. september 2021
Qarax ay 20 qof ku dhaawacmeen oo ka dhacay Gotoberg
Mandal: Ninkii wiilkii soomaaliga ah ee Yacquub iyo macalimad Tone dilay oo xabsiga ku dhintay.
Dowlada USA oo ku talisay inaan Norway loo safrin: Sababtan awgeed.
Degmada Bærum: Kalkaalisooyinku waa inay qoraan inta jeer ay musqusha galaan.
Norsomnews - 27. september 2021
Daawo: 30 sano oo ay Norway ku noolaayeen, maxaa caqabado ah oo soomaalida ka heysto isdhexgalka bulshada.
Sidan ayaa loogu kala guuleystay doorashadii Germany ka dhacday shalay.
Booliska London oo 7 qof u qabtay dilkan wiilkan soomaaliga ah.
Norsomnews - 26. september 2021
Oslo: Darawal taxi oo furaha baabuurka laga xaday.
Norsomnews - 25. september 2021
RW UK: Waxaan albaabada u fureynaa darawaliinta reer Yurub ee shaqo doonka ah.